Qorshayaasha Cusub ee ay Xukuumada Eritrea ka Wado Dalalka reer Galbeedka – Rasaasa News
May 28, 2010 Qorshayaasha Cusub ee ay Xukuumada Eritrea u Soo Dhiibtay Kooxda Jwxo-shiil.
Maxaad u malaynaysaan dadweynaha Somalida Ogadeeniyow in ay midayn karaan kooxda Jwxo-shiil, Oromo iyo xukuumada Eritrea, kuwaas oo haatan la mideeyey si ay uga hawl galaan dalalka reer galbeedka.
Waxaan wax la qarinayo ahayn in kooxda Jwxo-shiil, ay u adeegto xukuumada Eritrea oo iyadu dagaal kula jirta Itobiya. Kooxda ayaa waxaa ay dalka Eritrea ka heshaa lacagaha loo yaqaan [political fund] oo ay ku abaabusho dad yar oo wax ma garato ah oo ay ku beer laxawsato in ay wadaan dagaal xornimo doon ah. Dadkan oo badankood dibadaha ku nool oo aan waligoodba tagin dhulka Somalida Ogadeeniya.
Waa dhab in aynu ku jiray dagaal xornimodoon oo ay waday ONLF, waxaa kale oo aynu soo galay dagaal xornimodoon oo ay waday JXSG iyo waliba kii ka horeeyey ee uu waday xisbigii Nasrulahi.
Ururka ONLF, oo lahaa sumcada ugu balaadhan Jabhadihii ka kacay wadanka dhulka Somalida Ogadeeniya, ayaa waxaa loogu dawgalay Jwxo-shiil. Waxaana dhab ah in maxaabsi mooyee maanta ayna jirin wax dan urur wada, waxaa kale oo aan jirin cid taageero u haysay nacayb mooyee.
Dadweynow kolka ugu horaysay waxaad ogaataan in ONLF ay ahayd xornimodoon ee ayna ahayn xaquuq xukun doon. Waxaa kale oo ay ummada Somalida Ogadeeniya xornimo ka rabtaa dalka Itobiya, balse ma aha in ay doonayso in ay xukunka ka rido Melse Zinawe.
Hadaba, hadii ay arintu tahay tan kore, maxaa keenay in Oromo iyo Axmaaro ay meel la fadhiistaan dad sheeganay magca ONLF, oo sida aan idiin sheegayba haatan isagu suulay, laakiin ay calaamadihii ka joogaan.
Dhab waxaa ah in uu jiro ganacsi, ay wataan dad iyagu beelo dabada la galay, waxa calanka ONLF, Oromo dhax geeyana in ay yihiin dad wax ma garad ah, beesha Jwxo-shiil iyo beelo iyaga laftigoodu arimo qabiil u wata calanka ciilan.
Waxaad in badan aragteen, Oromo iyo Eritrea iyo qaar wata calankii ONLF, oo fagaareyaal wada taagan, waxaana la isweydiiyaa maxaa isu keenay, waa waali iyo been beeso lagu doonay.
Hadaba kolkii kooxda Jwxo-shiil, ay ogaatay ummada Somalida Ogadeeniya in ayna wanaag wadin ayaa dagaal shacabku ku qaadeen lagana saaray Ogadeeniya iyaga iyo la taliyeyaashii Eritrea.
Sidaasi daraadeed ayey xukuumada Eritrea haatan u soo dajisay qorsheyaal cusub oo ku aadan dibadaha iyada oo midaysay koox Oromo ah, Eritrea iyo kooxda Jwxo-shiil. Sababtuna waxaa weeye dalalka reer galbeedka ayaa waxay bilaabeen in ay si wanaagsan uga foojignaadaan ururada aan dawladaha lahayn ee raba in ay sameeyaan dhaqdhaqaayo ay kaga soo horjeedaan dalalkooda.
Haatan wixii ka dambeeya shir walba oo la doonayo in la qabto waa in uu ku dhexjiraa calanka Eritrea si uu gabaad ugu noqdo kooxahaas ku shaqeeya afkaarteeda. Kooxda Jwxo-shiil iyo kuwan kaleba sharciyan waxay ku jiraan arimo argagixiso kolka la macneeyo sifaha ay u shaqeeyaan, waana arinta keentay in dhawaan lagu xidho sadex ka mid ah kooxda Jwxo-shiil dalka Finland.
Admiral of the Desert Who Dismantled the Ogadeni Rebellion – Muhammad Omar Osman